Pliant Technologies သည် Webinar အသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Pliant Technologies သည် Webinar အသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်
ကုမ္ပဏီ၏ MicroCom M ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထူးခြားချက်များကိုဆွေးနွေးရန်ကန ဦး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို MicroCom XR Digital Wireless Intercom Solutions
Auburn, AL, ဇွန် 30, 2020 - Pliant Technologies က ကုမ္ပဏီ၏ကြိုးမဲ့ intercom ဖြေရှင်းချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသော Pliant မိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ webinar စီးရီးကိုကြေငြာခဲ့သည် ပထမစီးရီးကိုဇူလိုင် ၈ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ (CDT) နှင့်ဇူလိုင် ၉ ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ ၄ နာရီ (CDT) တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ MicroCom M နှင့် MicroCom XR intercom ကိုအာရုံစိုက်မည်။ Pliant ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းအားဒုဥက္ကG္ဌ Gary Rosen နှင့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမန်နေဂျာ၊ Art Gonzales နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ Mark Rehfuss တို့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်တတ်နိုင်သောကြိုးမဲ့ intercom ဖြေရှင်းချက်များ၏ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြသွားပါမည်။
“ ပထမဆုံး webinar ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ webinar စီးရီးအသစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လက်ခံရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ၎င်းသည်ယခုအခါ MicroCom ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတည်ရှိနေသော intercom ဖြစ်နိုင်ချေများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်” ဟု Pliant Technologies ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းအားဒုဥက္ကPresident္ဌ Gary Rosen ကပြောကြားသည်။ ။ “ Pliant Technologies တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Pliant intercom ဖြေရှင်းချက်များမှမည်ကဲ့သို့အကျိုးအရှိဆုံးရရှိမည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အခွင့်အရေးအသစ်များကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ MicroCom webinar ကိုဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှာတိုက်ရိုက်ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေ့အတွက်ပြက္ခဒိန်များကိုမှတ်သားပါ။ ”
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအစည်းအဝေးများသည်တက်ရောက်လာသူများကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုများ၌မေးခွန်းများတင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုတွင် Pliant အဖွဲ့သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်၎င်း၏အခြေခံအခြေပြု - အခမဲ့ MicroCom စနစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ Webinar သည် MicroCom M နှင့် MicroCom XR ယူနစ်များအပြင် Pliant ၏ SmartBoom နှင့်အထူးနားကြပ်များကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Pliant အဖွဲ့သည်လက်တွေ့ကျကျအသုံးချခြင်းများနှင့်သင်၏ application အတွက်အကောင်းဆုံး Pliant SmartBoom နှင့်အထူးနားကြပ်များကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များကိုတင်ပြပါမည်။ MicroCom webinar တွင်မှတ်ပုံတင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
Rosen က“ ရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရနိုင်မယ့်ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ intercom ဆိုတာဘယ် application အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးစံပြ intercom solution ဖြစ်တယ်။ အရည်အသွေးမြင့်သောအသံနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးများပါ ၀ င်သည့်လက်များ၊ full-duplex intercom သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးမ ၀ င်သောဘတ်ဂျက်များကိုတောင်မှချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ”
ဇူလိုင်လတစ်လျှောက်လုံးတွင် Plong သည်ပညာရေးဆိုင်ရာ webinars အမျိုးမျိုးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (အရှေ့အချိန်ဇုန်ဖောက်သည်များအတွက်) တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
မနက် ၁၁ နာရီ EDT / ၁၀ နာရီနံနက် ၁၀ နာရီ CDT နှင့်ကြာသပတေးသောနေ့ (အနောက်အချိန်ဇုန်ဖောက်သည်များအတွက်) PDT / 11 pm CDT ။ ခေါင်းစဉ်များ CrewWare LIVE ပါဝင်သည်! ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်တွင်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ နှင့် ၂၃ တွင်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း၊
MicroCom Pliant Technologies က Webinars 2020-06-30
ယခင်: ဖုံးကွယ် r17.3 ယခုအသက်ရှင်သည်: ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်အဓိကသော့ချက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ
နောက်တစ်ခု: LYNX Technik သည် CGDM ဖြင့် 12Gbit Dual Channel SDI Fiber Transmitter အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်